Alahady 18 Oktobra 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
“MIROSOA AMIN'NY FINOANA MASINA”
Alahady ivom-bokatry ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno
Alahady 18 Oktobra 2020, Alahady fahatelo ibanjinana ny lohahevitra “Mirosoa amin’ny fonoana masina”. Ny fidirana faharoa tamin’ny 10ora maraina no nangalàna izao tatitra izao. Alahady natokana itondrana am-bavaka ny MAMRE. Anio no ivom-bokatry ny Sampana Mpiangaly Zava-maneno. Ramatoa RABAKO Miora no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina kosa no nitory ny tenin’Andriamanitra.
Ny Salamo 93,1-5 no niarahana namaky ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra.
Noventesina ny FFPM 1 : 3 » Andriananahary Masina indrindra » ary nanao ny vavaka fisaorana ny mpitarika taorian’izany : « Noho ny fahasoavany sy ny indrafony nahavory ny mpianakavin’ny Tompo dia natolotra an’Andriamanitra ny dera, laza ary voninahitra.Nisaorana ny Tompo noho ny fotoana anio izay ahafahana miombom-po amin’ny Sampana Mpiangaly Zava-maneno sy mitondra am-bavaka ny MAMRE. Nisaorana ny Tompo noho ny fitantanany nandritry ny erinandro.
Nangatahina ny Tompo mba hanatrika ny fanompoam-pivavahana anio.
Nangatahina ny Tompo mba hamafa ny heloka sy tsy fahamendrehan’ny mpanompony ahafahan’ny mpanompony mahita ny tavan’ny Tompo. «
Zoky RAHALIVASEHENO Radanielina Noro mpampianatra ao amin’ny K6 no nanatontosa ny dimy minitran’ny Sekoly Alahady
Ny I Korintiana 16,13b “Tomoera tsara amin’ny finoana” no nangalana ny hafatra ho an’ny Ankizy sy ny Tanora.
Tantara-na zazalahy iray no nozaraina tamin’izany. Nampidirina Sekoly Alahady ity zazalahy ity ary dia nazoto tokoa sady nandray anjara mavitrika tamin’ny asan’ny fiangonana no navitrika tamin’ny fandalinam-pinoana. Noho izany fahazotoana nananany sy famporisian’ny Ray aman-dreniny azy tamin’ny fanarahana an’i Kristy izany dia nitombo tamin’ny finoana izy.
Ny hafatra azo sintonina amin’izany tantara fohy izany dia ny famporisihana ny ray aman-dreny rehetra sy ny mpanabe mba itaiza tsara ny zanaka amin’ny finoana.
Nisaorana ny Tompo noho ny hafany izay nampianatra mba hitoetra tsara amin’ny finoana. Notrotroina am-bavaka ireo zanaka izay hanala bacc rahampitso Alatsinainy mba ahatoky sy hino an’Andriamanitra.
Notanterhina ny hira FFPM 480,1 : » Mamy ny foko ry Jesoa » mialoha ny vakiteny.
Vavaka mialoha ny vakiteny : Nisaorana ny Tompo noho ny fahafahana miombom-bavaka.
Nisaorana Izy noho ny soa azo avy Aminy, noho ny Teny soa omeny mampiroso amin’ny Finoana Masina. Nangatahina ny Tompo mba ahatonga izany Teny izany ho latsa-paka any amin’ny tsirairay hananany fiainam-baovao sy hanome hery azy.
Novakiana misesy ny Tenin’ny Soratra Masina izay hita tao amin’ny :
– II Tantara 20 : 20 – 23
– Matio 21 : 18 – 22
– II Timoty 1 : 1 – 5
Somary niavaka ny toriteny anio satria dia notontosaina tamin’ny toriteny am-peon-kira izany izay niarahana tamin’ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno.
Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nitory ny teny
ANDRIANASY Fanja kosa no niventso ireo tononkalo sy tononkira
Ireo mpitendry ao amin’ny SMZM kosa no nandravaka ny toriteny tamin’ny feonkira.
Nambaran’ny Mpitandrina tamin’ny mpianakavin’ny finoana fa Fitiavana mandrakizay no nitiavan’Andriamanitraantsika ary izany fitiavana izany no nampaharetan’Andriamanitra ny famindram-pony tamintsika. Ny zanak’Israely no niantefan’izany teny izany tany am-boalohany. Ankoatra ny adyamin’ny fahotana dia manampy antsika amin’ny ady rehetra atrehitsika ny Tompo. Teto dia nataon’Andriamanitra mpandresy ny zanak’Israely satria dia nataony niady an-trano ny fahavalon’ny olon’Andriamanitra ka resy ho azy.
Ny Fitiavan’iKrity dia mitondra antsika amin’ny finoana masina.
TONON’KIRA sy FEON-JAVAMANENO : “Ny fitiavana”
Ny olona nandre ny fitiavana masina dia olona nandre ny antson’Andriamanitra sy mamaly izany ary nanapakevitra handroso.
Ny antson’Andriamanitra dia mizara roa: ao ny antso miantefa amin’ny vahoaka. Ny zanak’Israely dia firenena voaantson’Andriamanitra.
Ao kosa ny antso miantefa amin’ny olon- tokana. Ny olona voaantso amin’izany dia manana andraikitra isolo tena an’Andriamanitra hanatontosa ny asany.
I Paoly izao dia olona nanana ny fiainany amin’ny maha-Jiosy azy ary rehefa voaantson’Andriamanitra izy dia niova fo nanaiky ny antson’ny Tompo ka nahataona olona maro.
TONONKALO SY FEON-KIRA “ Feo miantso”
Jesoa dia sarotiny amin’ny finoantsika. Ny finoana dia hery ahafahana mahavita zavatra mihoatra izay eritreretina toy ny famindrana tendrombohitra araka izay nambaran’i Jesoa na ihany koa famonoana hazo tsy mamoa amin’ny alalan’ny fibaikoana araka izay nataon’I Jesoa.
Mamonjy sy manafaka ny finoana an’I Jesoa Kristy.
Hoy mantsy ny Tompo “Fa toa izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny Zanany Lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy”
“Aty amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana kanefa matokia fa Izaho efa naharesy izao tontolo izao”
TONONKALO SY FEONKIRA “Noho”
Vavaka setrin’ny toriteny:
Nisaorana ny Tompo noho ny fitiavany, ny hafatra nomeny tamin’ny toriteny.
Noho ny tsy fahatanterahana ny sitrapon’Andriamanitra dia natao ny vavaka fifonana ho famelan-keloka.
Niarahana nanonona ny fanekem-pinoana laharana fahatelo.
RABOANARIJESY Liantsoa no namaky ny tatitra
Notaterina ireo asa vitan’ny Sampana teto anivon’ny fitandremana toy ny fandraisana anjara tamin’ny fanompoam-pivavahana sy fahoriana ary fanamasinana fanambadiana. Notanterina ihany koa ny fandraisany anjara amin’ny fandravahana mozika ireo fotoan-
dehibe nankalazaina teto amin’ny fitandremana.
Nampahafantarina ny fiangonana ireo seho nandraisan’ny sampan anjara.
Nambara ny fanatanterahan’izy ireo ny asa sosialy toy ny famangiana ireo zaza kamboty sy ny fampaherezana azy ireo ary ny famangiana ny zokiolona.
Nambara fan oho ny amehana ara-pahasalamana dia nisy ny fikasana tsy tanteraka, na dia izany aza anefa dia nifanome Tanana tamin’ny fiangonana ny sampan tamin’ny fanatontosana ny “fanompoam-pivavahana en ligne”
Amin’ity volana Oktobra ity dia mitohy ny fanompoam-pivavahana in-droa isak’Alahady.
Amin’ny fito ora ny fidirana voalohany ary amin’ny folo ora maraina kosa ny fidirana faharoa.
Miomana amin’ny fandraisana azy ireo ho mpiray latabatra amin’ny Tompo ny Katekomena
Mitohy ny fianarana soratra Masina ka ny Jaona toko faha 16 izao no iarahan’ny mpanakavin’ny Tompo mamaky.
Nambara ireo fotoana amin’ity erinandro ity.
Nambara ny toetry ny vola nandritry ny erinandro.
Nametraka taratasy fisaorana noho ny fahatontosan’ny Fifaninanana Soratra Masina ny Vaomieran’ny aim-panahy.
Notontosaina ny fiarahabana ireo zanaky ny fiangonana nahatontosa ny fanamasinana ny fanambadiana ary nentina amy-bavaka izy ireo.
Novakianaireo voady sy rakipisaorana . Ny SMZM no nanao feon-kira nandritry ny rakitra : » ARIA «
Ho fanolorana ny rakitra dia ny Ffpm 275 : 1 » Raisonao ry Tompo soa «
Nisaorana ny Tompo nohon’ny fahatontosan’ny rakitra, Nangatahina Izy mba handray sy hanamasina izany fanomezana izany.
Nentina am-bavaka ny asan’ny Fiangonana, ny mpitory ny filazan-tsara, ny Toby masina.
Nentina am-bavaka ihany koa ireo Mpiangona eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena sy ny zanaka am-pielezana.
Nentina am-bavaka ny SMZM, ny sampana sy sampan’asa rehetra ary ireo rafitra misy eto amin’ny Fitandremana.
Notrotroina am-bavaka ireo mpanala fanadinana Baccalaureat.
Nentina am-bavaka ny sahirana, ny tsy salama, ny mana-manjo.
Nentina am-bavaka ireo manana hataka manokana sy ireo nanao raki-pisaorana sy voady masina.
Natao ny hira FFPM 427 : 2 » Ho vavolombelonao » mialoha ny filazana ny tondrozotra sy tsodrano ary ny andininy faha telo kosa no namaranana ny fotoana.
Nitarika ny fotoana: RABAKO Miora
Nitory ny teny: RAHARIJAONA Solofonirina
Dimy minitran’ny Sekoly Alahady: RAHALIVASEHENO Radanielina Noro
Namaky ny teny: RAKOTONDRAMBOA Fidy (Vavaka sy Testamenta taloha) ; RAOLIARIZAKA Bakoly (Testamenta vaovao)
Sono: RANDRIAMAHEFA Tinarivony
Fafana: RABAKO Tovohery